Extrusion daahan & Machine dukumiintiyo - Shiinaha Qingdao Shicheng caaga
daahan & dukumiintiyo mashiinka iyo mishiinka daabacaadda
guddiga caag ah iyo sheet ...
daahan & dukumiintiyo ...
Extrusion daahan & dukumiintiyo Machine
Extrusion daahan & Laminating Machine waa kartoo, wax soo saarka sare badhtamaha iyo model hi-dhamaadka ee ay FEEC. Mashiinka kani waxa uu isticmaalaa PP / PE sida wax cayriin, wuxuu qaadanayaa / dhinac laminate film socodka-saarayay tiknoolaji si ay u-hal dhinac double la substrate (maro dhar caag ah) ama caag warqad sida laba-in-mid ama saddex-in-mid wax soo saarka. Laga soo bilaabo qaybta unwind, unit laminating in ay unit nal, mashiinka oo dhan waxaa si toos ah ay gacanta ku computer iyo qalabaysan qalabka korontada iyo farsamo sare, si ac ...
Extrusion daahan & Laminating Machine waa kartoo, wax soo saarka sare badhtamaha iyo model hi-dhamaadka ee ay FEEC. Mashiinka kani waxa uu isticmaalaa PP / PE sida wax cayriin, wuxuu qaadanayaa / dhinac laminate film socodka-saarayay tiknoolaji si ay u-hal dhinac double la substrate (maro dhar caag ah) ama caag warqad sida laba-in-mid ama saddex-in-mid wax soo saarka. Laga soo bilaabo qaybta unwind, unit laminating in ay unit nal, mashiinka oo dhan waxaa si toos ah ay gacanta ku computer iyo qalabaysan qalabka korontada iyo farsamo sare, si ay u gaaraan xakameynta iyo gacan ku haynta koox gaar xirid, xawaaraha mechnical gaari karaan 200m / min ku salaysan shuruudaha macaamiisha, waxa uu leeyahay sifooyinka of technology sare, tayo deggan, hawlgalka habboon iyo qalabaynta sare.
Waxaa si weyn loo loo isticmaalo baakadaha kala duwan, kaydinta, qalabka gaadiidka ee kiimikada, petrification, sibidhka, metallurgy, warshadaha macdanta, iwm.
Qaybaha muhiimka ah ee ay qaataan design farsamada sare si ay u daboosha baahida wax soo saarka oo tayo sare leh macaamiisha ee.
qaybta dukumiintiyo ah ayaa ansixiyey calender saddex duuban, taas oo uu leeyahay astaamaha ciidamada uniform, hawlgalka ku haboon, ammaanka iyo qaybta laminating reliability.The in lagu qalabeeyaa karaa preheating rollers for preheating iyo qallajinta ee substrate, isaguu laminating, isaguu silicone iyo rullaluistemadka jaraa'id yihiin taadii lakabka biyo qasbay qaboojinta dhismeedka wareegga dhiigga, qaboojinta saameyn waa ku weyn yahay.
Rewinder isticmaalaa rullaluistemadka cayaar xakamaynta xiisad auto, guri riixaya dhismeedka cudud cadaadis, si joogto ah dusha xiisad nal double-station khilaaf, ay kamidka pneumatic, waxaana lagu qalabeeyey ku laayeen falinjeeerka iyo qarkiisa ah buunafuufid xusuus qalab, aalad wax soo saarka dhererka Electricity si loo gaaro aan kala joogsi lahayn oo duudduuban beddelo iyo nal duudduuban guri (qalab dheecaan duudduuban sida xulashada waa la heli karo)
Waxs laminating ee substrate bac Jumbo, mashiinka wuxuu qaadanayaa qalab kala jejebiyey, waayo, Kitaabkii duudduubnaa oo dhar fidsanaan si loo hubiyo in dusha substrate waa siman yahay ka hor inta laminating iyo hagaajiyo tayada sheyga. unwinder Double-station qaadanayaa ku laayeen auto xakamaysada qabto in ay gacanta si toos ah Orient iyo qaabkaaga ee substrate, iyo xakameeyo xiisadda dusha of substrate ah by kala jejebiyey, si loo gaaro xiriir pneumatic maro iyo kitaabkii duudduubnaa beddelo iyada oo aan hoos u xidhay.
wax soo saarka wax soo saarka ayaa la wanaajiyey iyo isticmaalka tamarta waa la dhimay. Waxaa qalabaysan qalab munaarad ee marada embriyaha, in ay ogaadaan laminating double dhinac ka mid ah dhar embriyaha. extruder waxaa uu aqbalayaa dhismeedka double-lakabka, iyo flowchannel ku extrusion caag ansixiyeen design jilidda computer. awoodda extrusion wuu weyn yahay, saamaynta ay isku qasin waa ka fiican, iyo isticmaalka tamarta waa hoose.
wax soo saarka Intelligent, yareeyo shaqada. mashiinka oo dhan in lagu qalabeeyaa karaa interface mashiinka-insaanka iyo PLC gacanta programmable, si loo gaaro barnaamijka habayn ku xirid saami, khalad waaxyihiisu, waaxyihiisu iyo hawlaha kale qalabaynta.
Width dukumiintiyo 600-1200 900-1500
dhar dia400-650 oo duudduuban 1500-2100 1500-2300
dhumucdiisuna dukumiintiyo 0.010-0.08 0.010-0.08 0.010-0.08 0.015-0.08
Farsamo Line Speed 1350 1650 2150 2550
Ballaca fur, L / D 30-200 30-200 30-200 30-200
Length rullaluistemadka Φ90 X 33 Φ90 X 33 Φ100 X 33 Φ120 X 33
Max.Unwind / dib u socon Roll Ballaca Φ1200 Φ1200 Φ1200 Φ1200
Isticmaalka Air 0.6 0.6 0.6 0.6
qaboojinta Biyaha 0.5 0.5 0.5 0.5
Total Weight around20 around25 around28 around28
Size Line (L × W × H) 10 × 9.5 × 2.5 11.7 × 10.6 × 2.8 11 × 13 × 3.4 11 × 13 × 3.4
Previous: derbiga hal pe mashiinka biibiile jiingado
Next: Extra-width Extrusion daahan & dukumiintiyo Machine
Daahan Oo dukumiintiyo Extrusion Line
Daahan Oo dukumiintiyo Line
Daahan Oo dukumiintiyo Lines
Daahan Oo dukumiintiyo Machine
Daahan Oo dukumiintiyo Makiinado
Daahan Oo dukumiintiyo Production Line
Extra-Width Extrusion daahan Oo dukumiintiyo Extrusion Line
Extra-Width Extrusion daahan Oo dukumiintiyo Line
Extra-Width Extrusion daahan Oo dukumiintiyo Lines
Extra-Width Extrusion daahan Oo dukumiintiyo Machine
Extra-Width Extrusion daahan Oo dukumiintiyo Makiinado
Extra-Width Extrusion daahan Oo dukumiintiyo Production Line
Extrusion daahan Oo dukumiintiyo Extrusion Line
Extrusion daahan Oo dukumiintiyo Line
Extrusion daahan Oo dukumiintiyo Lines
Extrusion daahan iyo kuwa dukumiintiyo
Extrusion daahan Oo dukumiintiyo Makiinado
Extrusion daahan Oo dukumiintiyo Production Line
Extra-width Extrusion daahan & dukumiintiyo ...
Afar mishiinka daabacaadda midabka